विद्यालयमा अति भो अतिक्रमण ! - Shikshak Maasik
by • • Homepage Mosaic, स्थलगत • Comments (0) • 2057
यही पृष्ठभूमिमा, हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका अतिक्रमणहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाको विकास र कार्यान्वयन सबैको साझ दायित्व र चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि यसको संचालन निश्चित प्रणाली अनुरूप मात्र हुनुपर्ने हुन्छ । सहयोग, साझेदारिता र सहकार्यका नाममा कसैको सोख, कार्य प्रगति र अभीष्ट पूरा गर्ने वा कमाइखाने भाँडो बनाउने माध्यम विद्यालयहरू बन्नुहुँदैन । यहाँ यसै विषयलाई प्रष्टीकरण गर्ने प्रयास हुनेछ ।
जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, ललितपुरले हालै रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटमा विद्यालय शिक्षकहरूलाई समेत राखी दुईदिने तालीम संचालन गर्‍यो । यो पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यतिबेला सरसफाइ तथा स्वच्छता, महिला वा लैंगिक हिंसा, जलवायु परिवर्तन, अपराध न्यूनीकरण, किशोरी शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, पोषण, प्रकोपलगायतका विषयमा विद्यार्थीलाई पढाउन खोज्नेहरू बढेका बढ्यै छन् । तर विद्यालयको नियमित पद्धति भन्दा बाहिरबाट यसरी पटके रूपमा गरिने यस्ता गतिविधिले विद्यालयको नियमित लयमा भने गम्भीर असर पारेका छन् ।
‘राष्ट्र शान्ति’ का नाममा महायज्ञका संकल्पकर्ता भनिएकाहरूको पैसा कमाउने रोजाइमा समेत विद्यालयहरू पर्ने गरेका छन् । रुकुममा हालै मात्र एक जना स्वनामधारी पण्डितबाट चारवटा विद्यालयमा धार्मिक महोत्सव महायज्ञ सम्पन्न भइसकेका छन् । विद्यालयमा हुने यस्ता हर्कतलाई कसरी लिने ? राजदूतावासहरू साइकल बाँड्न विद्यालय छिरिरहेका छन् । योगीहरू योग सिकाउन विद्यालयका नियमित कक्षा ब्रेक गर्छन् । कोही आउँछ र बाल सांसद्को कुरा गर्छ, कोही आउँछ र बाल संजाल भन्छ । एउटा आउँछ ‘विद्यार्थीको हाजिरी परीक्षण’ भन्छ, अर्को आउँछ ‘प्रअहरूको मोबाइल बैठक’ भन्छ । अर्को आउँछ ‘सिकाइ उपलब्धि टेष्ट’ भन्छ, अर्को आउँछ ‘स्कूल आत्म–मूल्यांकन’ भन्छ । फेरि अर्को आउँछ र ‘गुणस्तरीय सिकाइ सामग्री’ भन्छ । कोही ईएमआईएस भन्छ, कोही एसईएमआईएस भन्छ । कोही हरियाली स्कूल भन्दै आउँछ, त कोही शान्ति क्षेत्र भन्दै आउँछ । पशुपतिमा जोगीहरू छिरे झैं जो पनि आफूखुशी विद्यालय छिरिरहेका छन् ।
फलानो दिवस मनाउनु पर्‍यो विद्यार्थी चाहियो, अमूक दिवस आयो विद्यार्थी चाहियो । कोही ‘मिन्सुरेसन हाइजिन’ को कक्षा लिन्छु भन्दै आउँछ, कोही चाहिं ‘सेनेटरी प्याड’ बनाउने तालीम चलाउँछ । कोही लोकगीत गाइदे भन्छ, कोही निबन्ध प्रतियोगिता भन्छ । दुनियाँका नानाभाँती अभीष्ट पूरा गर्ने साझ चौतारी बन्दैछन् विद्यालयहरू ।
सतहमा हेर्दा कुरा सामान्य लाग्न सक्छ तर अन्तर्य गम्भीर छ । विद्यार्थीलाई ट्राफिक नियम, लैंगिक हिंसा वा जलवायु परिवर्तनबारे पढाउनु छ भने पाठ्यक्रम परिवर्तन किन नगर्ने ? प्रकोप, ‘मिन्सुरेसन हाइजिन’ र सामाजिक सदाचारका विषय पाठ्यक्रममार्फत किन नल्याउने ? यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई शिक्षकले नै नियमित रूपमा पढाउने गरी पाठ्यपुस्तकमा समायोजन किन नगर्ने ? कुनै निश्चित दिवस मनाउनै पर्ने हो भने पाठ्यक्रममा किन नपार्ने ? शिक्षकलाई ‘सेनेटरी प्याड’ बनाउने तालीम चाहिएकै हो भने शिक्षकको पेशागत तालीम (टीपीडी) मा त्यसलाई किन नपार्ने ?
हाम्रा विद्यालयलाई यसरी खुला प्रयोगशाला हुनबाट जोगाउनु जरूरी छ । प्रयोगशाला नै बनाउने हो भने पनि पाठ्यक्रममा टेकेर बनाउनुपर्‍यो । यसरी नानाभाँती रूपमा नानाथरी परीक्षण गर्ने र कमाइखाने भाँडो बनाउनबाट विद्यालयलाई जोगाउनै पर्छ । खुलापन र लोकतन्त्रको अर्थ छाडापन र भीडतन्त्र हुनुहुँदैन ।
भौतिक निर्माण र सेवासुविधा सम्बन्धमा पनि आफूखुशी गर्न बन्द गरिनुपर्छ । सहयोगीहरूले शिक्षा मन्त्रालय वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा स्रोतको साझेदारी गर्नु राम्रो हुन्छ । विद्यालयमा भवन, शौचालय वा अन्य भौतिक योजना निर्माण गर्दा जिशिकामार्फत गरौं । दोहोरोपना हुँदैन । अर्को कुरा जिशिकामार्फत शौचालय निर्माणको प्रावधान हुँदाहुँदै जिविस वा खानेपानी कार्यालयबाट किन शौचालय बनाउनुपर्‍यो ? यसमा नीतिगत तहबाटै ध्यान दिनु जरूरी छ ।
अब विद्यालयहरूले सिकाइमा स्वावलम्बन जगाउनुपर्छ, स्वाभिमानलाई बढाउनुपर्छ । सहयोग, सहकार्य, समझ्दारी र साझेदारीका नाममा लाचार र निरीह बन्नुहुँदैन । 
लेखकः तिलक गौतम